Codsiyada Sanduuqa Dhaqaalaha ee McKnight ee Abaalmarinta Aqoonyahanka Neuroscience oo la filayo Janaayo 10, 2022.
Sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience wuxuu taageeraa cilmi -baaris cusub oo loogu talagalay inay sayniska u dhawaato maalinta cudurrada maskaxda si sax ah loo ogaan karo, looga hortagi karo, loona daweyn karo. Si taas loo gaaro, Sanduuqa Dhaqaalaha ee McKnight ee Neuroscience wuxuu casuumayaa codsiyada 2022 McKnight Scholar Awards.
Abaalmarintaan waxaa loo aasaasay si loo siiyo baarayaal dhalinyaro ah oo rajo leh marxaladaha hore ee xirfad cilmi baaris madaxbanaan fursad ay ku horumariyaan shaqadooda dhibaatooyinka halista ah ee sayniska maskaxda. Codsadayaasha abaalmarinta McKnight Scholar Awards waa inay muujiyaan xiisaha ay u leeyihiin xalinta dhibaatooyinka muhiimka ah ee meelaha ku habboon ee neerfaha, oo ay ku jiraan tarjumaadda cilmi-baarista aasaasiga ah ee daaweynta neerfaha. Abaalmarinta waxaa la siiyaa aqoonyahanno da 'yar oo saynisyahanno ah oo haysta MD iyo / ama Ph.D. shahaadada iyo kuwa ku jira heerarka hore ee aasaasida sheybaar madax banaan iyo xirfad cilmi baaris. Dhaqan ahaan, musharaxiinta guuleysta waxay qabteen jagooyin macalimiin ah ugu yaraan hal sano. Magacyada kuwii hore u qaatay iyo mashaariicdooda, halkan guji.
Tartankan, illaa lix Aqoonyahan McKnight ayaa loo dooran doonaa inay helaan saddex sano oo taageero ah, laga bilaabo Luulyo 1, 2022.
Codsadayaasha Abaalmarinta Aqoonyahanka McKnight waa inay noqdaan baarayaal madaxbannaan oo ka shaqeeya hay'adaha cilmi-baarista ee aan macaash doonka ahayn ee Mareykanka, waana inay qabtaan ballan waqti-buuxa ah oo ah darajada Kaaliyaha Professor, waana inay ka shaqeeyeen darajadaas wax ka yar afar sano waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga. Saynisyahannada haysta cinwaannada kale sida Kaaliyaha Cilmi -baarista, Kaaliyaha Ku -xigeenka Kaaliyaha, Kaaliyaha Raadiyaha Cilmi -baarista, Professor -ka Booqashada ama Macallinka uma qalmaan, waqtiga lagu qaatay adeegga darajooyinkaas laguma xisaabtamo afarta sano ee adeegga go'aaminta u -qalmitaanka. Haddii hay'adda martida loo yahay aysan isticmaalin magacyo aqoonsi, warqad ka socota sarkaal sare oo hay'ad (tusaale Dean ama Agaasimaha Cilmi -baarista) waa inay xaqiijisaa in codsaduhu haysto agab/hay'ad gaar ah oo u go'an, meel shaybaar, iyo/ama tas -hiilaad. Waxaan danaynaynaa juqraafi, jinsi, iyo kala duwanaanshaha jinsiyadda, waxaanan ku dhiirri -gelinaynaa haweenka iyo bulshooyinka midabka leh inay codsadaan. Intaa waxaa dheer, codsadayaashu waa inay lahaadaan:
Diiwaangelin cilmi baaris ku dhisan
Caddayn u heellan mustaqbal shaqo ee neerfaha
Diiwaangelinta in hay'adda kafaala qaadeysa ay dowladdu oggolaatay codsaduhu inuu ka shaqeeyo Mareykanka
Codso in kabadan laba wareeg oo tartan ah
Horey ayaa loo siiyay xilka
Hayso abaalmarin kale oo laga helo Sanduuqa Lacagta ee McKnight
Tirada iyo ujeedada taageerada
Aqoonyahan kasta oo McKnight wuxuu heli doonaa $75,000 sannad walba 2022, 2023, iyo 2024. Lacagta ayaa loo isticmaali karaa si kasta oo sahli karta horumarinta barnaamijka cilmi -baarista ee Aqoonyahanka, laakiin maaha kharashyo aan toos ahayn.
Guddiga dib -u -eegista ayaa qiimeyn doona codsiyada waxayna ku casuumi doonaan dhowr qof oo la doortay si ay wareysi ula yeeshaan guddiga. Codsadayaasha la xushay waxaa la ogeysiin doonaa dhammaadka Maarso. Wareysiyada waxaa loo qorsheeyay in lagu qabto zoom Jimcaha, Abriil 29, 2022. Guddigu wuxuu markaa u soo jeedin doonaa murashaxiinta Guddiga Agaasimayaasha Sanduuqa Awqaafta go'aanka kama dambaysta ah. Abaalmarinta waxaa lagu dhawaaqi doonaa dhammaadka May 2022.
Si loo helo arjiga iyo tilmaamaha iyo bogga internetka, riix halkan.